Uyintoni umgaqo wokusebenza kwetradiyo yedijithali yerediyo? -CZH / Fmuser Fm Transmitter China Umxhasi Qhagamshelana: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyueokera99991
ikhaya » iindaba » Uyintoni umgaqo wokusebenza kwetradiyo yedijithali yerediyo?
Ukudluliselwa kwedijithali FM kunomahluko obalulekileyo kwi-Analog FM Transmitter.
Ngokufutshane, i-Analog FM Transmitter isebenzisa itekhnoloji ye-analog ye-VCO + PLL, kodwa iDigital FM Transmitter isebenzisa isoftware ye-DSP + DDS yesoftware yedijithali, umzobo njengasezantsi:
Isidluliseli soMsakazo weDijithali sibandakanya iinxalenye zemodyuli ezi-6: Imodyuli yokuNgena kweSandi soMsindo; Imodyuli yenkqubo yeDigital Signal; Imodyuli yedijithali FM kunye neemodyuli zokudlula zeBand Pass; Imveliso yokukhupha amandla kunye nemodyuli yokudlula esezantsi; Umatshini wokudibanisa umatshini womntu kunye neModyuli yoNxibelelwano kunye noGcino lwaMandla kunye nemodyuli yesekethe.
Imodyuli yokuNgena kweAudio Signal: Ifumana isiginali yokufaka kunye nomsindo wedijithali (AES / EBU). Isandi somsindo we-Analog siguqulela kwisandi sedijithali ngokusebenzisa (A / D) isiguquli, emva koko ukufaka i-DSP. Igalelo lomsindo weDijithali ngokuthe ngqo. I-DSP iyakukhetha ukuba loluphi uphawu olunokuba luphawu lokungenisa.
Imodyuli yenkqubo yeDigital Signal: Eli lelona candelo liphambili kwi-Exclute / Transmitter, eyona nto iphambili kukusebenza okuphezulu kwe-550MHz yedijithali yomqondiso wedijithali (i-DSP), le DSP inokulawulwa yisoftware kwaye iqhubekise isiginali yedijithali yokufumana uhlengahlengiso; Ukucoca kwidijithali; ukugxininisa kwangaphambili kwidijithali; kwenzeka umshayeli wedigital; Ukufakwa kweekhowudi kwedijithali, kuze emva koko kudale ukuhamba komqondiso we-stereo, emva kokusebenza kwemathematics, ukuhamba kuya kumodareyithwa kuhambo lwe-FM Excer basband flow, iya kuba yedijithali ye-FM yokuhamba, lo mqondiso wokuhamba uza kuthunyelwa kwi-1000MHz Direct Digital Synthesizer (DDS) , emva koko utshintshe ube yiRadio RF Signal.
Imodyuli yedijithali FM kunye nemodyuli yokudlula ye-band Pass: Eyona nto iphambili kuyo iyedijithali yedijithali yedijithali (DDS), ifumana umjikelo wedijithali wohlobo lwento ephuma kwi-DSP, emva koko uqokelele umqondiso wedijithali ye-FM RF ngendlela yayo yangaphakathi ejikelezayo. / i-analog eguqulwayo inokwenza isibonakaliso esiguquliweyo se-Analog FM, ekugqibeleni sifumane umqondiso we-RF we-RF osulungekileyo kwifayile ye-Band-pass Filter.
Isiphumo samandla okukhupha kunye nemodyuli yokudlula ephantsi: Eli ziko livaliwe loLawulo loQhawu-lweeNgozi oluZenzekelayo (i-AGC) isiphatho samandla ombane we-FM RF kunye nesekethe yokudlula kweliphantsi. Inokuqinisekisa ukuba ukusetwa kombane kuzinzile ngexesha elide lokusebenza.
Imodyuli yomntu yoMatshini woNxibelelwano kunye neModyuli yoNxibelelwano: Eli ziko lisebenzisa intsebenzo ephezulu yokusebenza kweSystem-on-Chip (i-SOC) ukuqhubekeka ukuSebenzisa / ukuhambisa umatshini umatshini; Ukuqokelelwa kweenkcukacha zomsebenzi; Ukukhusela ialarm; Unxibelelwano neminye imisebenzi. Yonke imiyalelo yokusebenza igalelo ngeqhosha; Isikrini se-LCD kunye nokukhanya okuBonisa imeko yeTransterter. Ingasebenzisa i-RS232 / RS485 / CAN / TCPIP imbonakalo yonxibelelwano ukunxibelelana ne-PC ekude yokuhambisa idatha kunye nomsebenzi wolawulo kude.
Isibonelelo soMbane kunye noModyuli wesekethe: ibonelela ngombane ozinzileyo we-DC yamandla eenjineli nganye kwiTransmitter.
«Ngaphambili: Ngaba yintoni isibonelelo seDigital FM Transmitter?
Inkqubo yoqoqosho ye-Synchronous FM :Okulandelayo "